မော်ဒယ်ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးပေးမည်ဟုပြောဆိုစည်းရုံးပြီး ဟိုတယ်တစ်လုံးတွင်(....) မြိတ်မြို့သတင်း - Alinnpya
HomeNEWSမော်ဒယ်ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးပေးမည်ဟုပြောဆိုစည်းရုံးပြီး ဟိုတယ်တစ်လုံးတွင်(….) မြိတ်မြို့သတင်း
မြိတ်မြို့တွင် မော်ဒယ်ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးရန် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးသူ အမျိုးသမီးကို ဖမ်းဆီး စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်
မြိတ်တွင် မော်ဒယ်ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးပေးမည်ဟုပြောဆိုစည်းရုံးပြီး နောက် ထားဝယ်စုရပ်ကြီးမှ ဟိုတယ်တစ်လုံးတွင် သားမယားအဖြစ်ပြု ကျင့်ကာ ဗွီဒီယိုရိုက်ကူးပြီး ဖြန့်ဝေခဲ့သူတွေကို ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရက်နေ့က မြိတ်ရဲတပ် ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခဲ့ပြီး အမှုကြီး အမှတ်စဉ် ၂/၂၀၂၁ (ပ)၁၇/၂၀၂၁ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၆၃/၃၇၆/၁၁၄ ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူထားတယ်လို့ ဒုရဲမှူးချိုလွင် မြိတ်မြို့မရဲစခန်းမှူး ကမီဒီယာများကိုပြောဆိုခဲ့သည်။
ကျူးလွန်သူများဖြစ်တဲ့ ထက်ဖြိုးဝင်း(ခ)ကိုထက် ၊ Min Khant Htoo (ရေသန့်ဗူး) အကောက်ပိုင်ရှင်နှင့် Aung Min Khant အကောင့်ပိုင်ရှင်တို့ရဲ ဝန်ခံထွက်ဆိုချက်အရ မ…. နှင့် အဖော်အဖြစ်လိုက်ပါလာတဲ့ ဆိုင် အလုပ်သမားအမျိုးသမီးမှာ အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာတွင်ရှိနေပြီး မ….နှင့် ၎င်း တို့ (၃) ဦး တွေ့ဆုံနိုင်ရေးအတွက် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း ထွက်ဆို ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပြစ်မှုကျူးလွန်ရန် အားပေးကူညီခဲ့သူ နုနုလှိုင်(ခ)မယ်နု အား မြိတ်မြို့မရဲ စခန်းမှ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၆၃/၃၇၆/ ၁၁၄ ညွှန်းဖြင့် ဇန်နဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့၊နံနက် ၈ နာရီခန့်က ဖမ်းဆီးပြီး ဆက်လက်စစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ် နေတယ်လို့ သိရသည်။
ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ေမာ္ဒယ္ဓါတ္ပုံရိုက္ကူးရန္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေပးသူ အမ်ိဳးသမီးကို ဖမ္းဆီး စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္
ၿမိတ္တြင္ ေမာ္ဒယ္ဓါတ္ပုံရိုက္ကူးေပးမည္ဟုေျပာဆိုစည္း႐ုံးၿပီး ေနာက္ ထားဝယ္စုရပ္ႀကီးမွ ဟိုတယ္တစ္လုံးတြင္ သားမယားအျဖစ္ျပဳ က်င့္ကာ ဗြီဒီယိုရိုက္ကူးၿပီး ျဖန႔္ေဝခဲ့သူေတြကို ဇန္နဝါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔က ၿမိတ္ရဲတပ္ ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး အမႈႀကီး အမွတ္စဥ္ ၂/၂၀၂၁ (ပ)၁၇/၂၀၂၁ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၆၃/၃၇၆/၁၁၄ ျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူထားတယ္လို႔ ဒုရဲမႉးခ်ိဳလြင္ ၿမိတ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမႉး ကမီဒီယာမ်ားကိုေျပာဆိုခဲ့သည္။
က်ဴးလြန္သူမ်ားျဖစ္တဲ့ ထက္ၿဖိဳးဝင္း(ခ)ကိုထက္ ၊ Min Khant Htoo (ေရသန႔္ဗူး) အေကာက္ပိုင္ရွင္ႏွင့္ Aung Min Khant အေကာင့္ပိုင္ရွင္တို႔ရဲ ဝန္ခံထြက္ဆိုခ်က္အရ မ…. ႏွင့္ အေဖာ္အျဖစ္လိုက္ပါလာတဲ့ ဆိုင္ အလုပ္သမားအမ်ိဳးသမီးမွာ အခင္းျဖစ္တဲ့ေနရာတြင္ရွိေနၿပီး မ….ႏွင့္ ၎ တို႔ (၃) ဦး ေတြ႕ဆုံနိုင္ေရးအတြက္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ထြက္ဆို ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရန္ အားေပးကူညီခဲ့သူ ႏုႏုလွိုင္(ခ)မယ္ႏု အား ၿမိတ္ၿမိဳ႕မရဲ စခန္းမွ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၆၃/၃၇၆/ ၁၁၄ ညႊန္းျဖင့္ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔၊နံနက္ ၈ နာရီခန႔္က ဖမ္းဆီးၿပီး ဆက္လက္စစ္ေဆးမႈေတြ ျပဳလုပ္ ေနတယ္လို႔ သိရသည္။
Credit – Kyaw Soe